Tontolo iainana :: Raikitra ny fitakiana famerenana ny fitrandrahana hazo • AoRaha
Tontolo iainana Raikitra ny fitakiana famerenana ny fitrandrahana hazo
Nifanatrika tamin’ireo mpisehatra amin’ny fitrandrahana sy fivarotana hazo, tetsy amin’ny Hotel Colbert Antaninarenina, ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra, Raharinirina Baomiavotse Vahinala, omaly. Nisongadina ny fitakian’iretsy voalohany amin’ny fampiatoana ny fampiharana an’ilay naoty mandrara ny fitrandrahana sy ny fivarotana hazo sarobidy sy hazo fampiasa andavanandro, tamin’ny volana janoary 2019. Teo ihany koa ny fangatahana ny fahafahana mivarotra an’ireo hazo tsy azo nahetsika nandritra ny fotoana nampiharana an’io naoty io.
Ny 20%-n’ireo orinasa mpitrandraka sy mivarotra hazo no ahiana hikatona, amin’izao fotoana izao, raha toa ka mbola mitoetra ny fampiharana an’io naoty io. Nanome toky amin’ny fanolorana vahaolana ho azy ireo kosa ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra. « Hojerena ny fomba hahafahan’ireo orinasa mitazona an’ireo mpiasa ao aminy tsy ho very asa, ho an’ny tanjona fohy ezaka. Ny fametrahana paikady mahomby hahafahana mampiroborobo an’ity seha-piharina ity sady manaraka ny ara-dalàna kosa no tanjona lavitr’ezaka», hoy ny minisitra Raharinirina Baomiavotse Vahinala.
Fantatra fa mahatratra 6 000m3 ireo hazo tahiry tsy afaka namidy, taorian’ny famoahan’ny minisitera teo aloha an’ilay naoty tamin’ny 2019. Mila angatahina amin’ny lehiben’ny governemanta ny fivarotana an’ireo, hany ka mitoetra hatrany aloha ny famerana ny fitrandrahana hazo sarobidy eto amintsika.
Fitoriana eny amin’ny HCC
Fifidianana loholona :: Samy maka bahana ireo antoko hafa